Ukuchayeka kokuvumelanisa - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
KUNGANI IKHAMERA IDINGA “Ukulawula Ukuvumelanisa”
Sonke siyazi ukuthi ngesikhathi sendiza, i-drone izonikeza i-trigger-signal kumalensi amahlanu ekhamera ye-oblique. Amalensi amahlanu kufanele adalulwe ngokomqondo ngokuvumelanisa okuphelele, bese urekhoda ulwazi lwe-POS olulodwa ngesikhathi esisodwa. Kodwa ohlelweni lokusebenza lwangempela, sithole ukuthi ngemuva kokuthi i-drone ithumele isignali yokuqalisa, amalensi amahlanu awakwazanga ukudalulwa kanyekanye. Kungani lokhu kwenzeka?
Ngemva kwendiza, sizothola ukuthi umthamo ophelele wezithombe eziqoqwe amalensi ahlukene ngokuvamile uhlukile. Lokhu kungenxa yokuthi uma usebenzisa i-algorithm efanayo yokuminyanisa, ubunkimbinkimbi bezici zokuthungwa komhlabathi buthinta usayizi wedatha wezithombe, futhi kuzothinta ukuvumelanisa kokuchayeka kwekhamera.
Izici ezahlukene zokuthungwa
Uma izici eziyinkimbinkimbi kakhulu, kuba nkulu inani ledatha ikhamera edinga ukuyixazulula, iminyanise, futhi ibhale phakathi., kuthatha isikhathi esiningi ukuqedela lezi zinyathelo. Uma isikhathi sokugcina sifika endaweni ebucayi, ikhamera ayikwazi ukuphendula isignali yeshutha ngesikhathi, futhi isenzo sokuchayeka siyabambezeleka.
Uma isikhathi sokuphumula phakathi kokuvuleleka okubili sisifishane kunesikhathi esidingekayo ukuze ikhamera iqedele umjikelezo wesithombe, ikhamera izophuthelwa izithombe ezithathwe ngoba ayikwazi ukuqedela ukuvezwa ngesikhathi. Ngakho-ke, ngesikhathi sokusebenza, ubuchwepheshe bokulawula ukuvumelanisa ikhamera kufanele busetshenziswe ukuhlanganisa isenzo sokuchayeka sekhamera.
I-R&D yobuchwepheshe bokulawula ukuvumelanisa
Phambilini sithole ukuthi Ngemuva kwe-AT kusoftware, iphutha lendawo yamalensi amahlanu emoyeni kwesinye isikhathi lingaba likhulu kakhulu, futhi umehluko wokuma phakathi kwamakhamera ungafinyelela ku-60 ~ 100cm!
Kodwa-ke, lapho sihlola phansi, sithole ukuthi ukuvumelanisa kwekhamera kusephezulu, futhi impendulo ifike ngesikhathi kakhulu. Abasebenzi bakwa-R & D badidekile kakhulu, kungani isimo sengqondo kanye nephutha lesikhundla sesisombululo se-AT likhulu kangaka?
Ukuze uthole izizathu, ekuqaleni kokuthuthukiswa kwe-DG4pros, sengeze isibali sikhathi sempendulo kukhamera ye-DG4pros ukurekhoda umehluko wesikhathi phakathi kwesiginali ye-drone trigger kanye nokuchayeka kwekhamera. Futhi ihlolwe kulezi zimo ezine ezilandelayo.
Isigcawu A: Umbala ofanayo nokuthungwa
Isigcawu C: Umbala ofanayo, ukwakheka okuhlukile
Isigcawu D:imibala eyahlukene kanye nendlela yokwenza
Ithebula lezibalo zemiphumela yokuhlolwa
Ezigcawini ezinemibala ecebile, isikhathi esidingekayo ukuze ikhamera yenze ukubala kwe-Bayer nokubhala kuzokhula; kuyilapho izigcawu ezinemigqa eminingi, ulwazi lwe-high-frequency yesithombe luningi kakhulu, futhi isikhathi esidingekayo ukuze ikhamera iminyanise sizokwanda.
Kungabonakala ukuthi uma imvamisa yesampula yekhamera iphansi futhi ukuthungwa kulula, impendulo yekhamera inhle ngesikhathi; kodwa uma imvamisa yesampula yekhamera iphezulu futhi ukuthungwa kuyinkimbinkimbi, umehluko wesikhathi sokuphendula kwekhamera uzokhula kakhulu. Futhi njengoba imvamisa yokuthatha izithombe iyanda, ikhamera izogcina iphuthelwe izithombe ezithathwe.
Isimiso sokulawula ukuvumelanisa kwekhamera
Ekuphenduleni izinkinga ezingenhla, i-Rainpoo yengeze isistimu yokulawula impendulo kukhamera ukuze ithuthukise ukuvumelanisa kwamalensi amahlanu.
Isistimu ingakala umehluko wesikhathi "T" phakathi kwe-drone ethumela isignali yokuqalisa kanye nesikhathi sokuchayeka silensi ngayinye. Uma umehluko wesikhathi "T" wamalensi amahlanu ungaphakathi kwebanga elivumelekile, sicabanga ukuthi amalensi amahlanu asebenza ngokuhambisana. Uma inani elithile lempendulo lamalensi amahlanu likhulu kunevelu evamile, iyunithi yokulawula izonquma ukuthi ikhamera inomehluko omkhulu wesikhathi, futhi ekuchayekeni okulandelayo, ilensi izonxeshezelwa ngokomehluko, futhi ekugcineni. amalensi amahlanu azochayeka ngokuhambisanayo futhi umehluko wesikhathi uzohlala ungaphakathi kwebanga elijwayelekile.
Ukusetshenziswa kokulawula ukuvumelanisa ku-PPK
Ngemuva kokulawula ukuvumelanisa kwekhamera, kuphrojekthi yokuhlola nemephu, i-PPK ingasetshenziswa ukunciphisa inani lamaphoyinti okulawula. Njengamanje, kunezindlela ezintathu zokuxhuma zekhamera etshekile ne-PPK :
1 Enye yamalensi amahlanu ixhunywe ku-PPK
3 Sebenzisa ubuchwepheshe bokulawula ukuvumelanisa kwekhamera ukuze ubuyisele inani elimaphakathi ku-PPK
Ngayinye yezinketho ezintathu inezinzuzo kanye nokubi:
1 Inzuzo ilula, okubi ukuthi i-PPK imele kuphela indawo yelensi eyodwa. Uma amalensi amahlanu engavumelaniswanga, kuzodala iphutha lokuma kwamanye amalensi ukuthi libe likhulu ngokuqhathaniswa.
2 Inzuzo nayo ilula, ukuma kunembile, okubi ukuthi kungakhomba kuphela amamojula athile ahlukile.
3 Izinzuzo ukuma okunembile, ukuguquguquka okuphezulu, nokusekelwa kwezinhlobo ezahlukahlukene zamamojula ahlukile. Okubi ukuthi ukulawula kuyinkimbinkimbi futhi izindleko ziphakeme kakhulu.
Njengamanje kune-drone esebenzisa ibhodi le-100HZ RTK / PPK. Ibhodi lifakwe ikhamera ye-Ortho ukuze kufinyelelwe ku-1: 500 indawo yokulawula imephu ye-topographic-free, kodwa lobu buchwepheshe abukwazi ukuzuza indawo yokulawula ngokuphelele yokuthwebula izithombe ezitshekile. Ngoba iphutha lokuvumelanisa lamalensi amahlanu ngokwawo likhulu kunokunemba kokuma kokuhluka, ngakho-ke uma ingekho ikhamera etshekile yokuvumelanisa okuphezulu, umehluko wefrikhwensi ephezulu awusho lutho……
Okwamanje, le ndlela yokulawula iwukulawula okwenziwayo, futhi isinxephezelo sizokwenziwa kuphela ngemva kokuthi iphutha lokuvumelanisa ikhamera likhulu kunomkhawulo onengqondo. Ngakho-ke, ezigcawini ezinezinguquko ezinkulu ekuthunjweni, nakanjani kuzoba namaphutha ephuzu ngalinye amakhulu kunomkhawulo,. Esizukulwaneni esilandelayo semikhiqizo yochungechunge lwe-Rie, i-Rainpoo ithuthukise indlela entsha yokulawula. Uma kuqhathaniswa nendlela yamanje yokulawula, ukunemba kokuvumelanisa kwekhamera kungathuthukiswa okungenani ngokuhleleka kobukhulu futhi kufinyelele izinga le-ns!